Ekpere nye Atọ n'Ime Otu Dị Nsọ. ? Ihunanya, Ihe isi ike na ngwa ngwa.
11 Mingụ Nkeji
Ekpere nke Holy Holy Katọlik maka ịhụnanya, okwu siri ike na ngwa ngwa yana nchebe bụ otu n'ime ihe kachasị ike ebe ọ jụrụ Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ.
Okwu nke Chineke n’egosi anyi Chineke nke Nna nke ihe nile, ma weputara anyi Jisos Kraist onye ahu ka Chineke mere madu, no n’etiti ayi ma nye ndu ya n’ihi ihe ndi mmadu, mgbe O bara n’elu igwe opuru anyi na Mmuo Santo na ugbu a anyị nwere ike ịtụkwasị obi na atọ ahụ.
Nna ahụ na Ọkpara ahụ nọ n’elu igwe, Mmụọ Nsọ na-akpali n’obi anyị ka ọkụ.
Chọọchị Katọlik nwere ọtụtụ nke ekpere nke a kachapuru na-agwa ha atọ bụ na ha bụ otu, chi atọ n'ime otu.
Ha bụ ekpere na-ebilite n'ọnọdụ dị iche iche ebe aka mmadụ na enweghị ike ịrụ ọrụ, mgbe ahụ anyị dabere na ekpere n'ihi na naanị ọrụ ebube nke Chineke zuru.
1 Ekpere nke Atọ n’Ime Otu Onye bụ Holy Holy?
1.1 Ekpere nke Holy Holy Trinity
1.2 EKPERE EKPERE NIILE maka ima
1.3 Ekpere nke Atọ n’Ime Otu maka okwu siri ike ma dịkwa ọsọsọ
1.4 Short maka nchebe
Ekpere nke Atọ n’Ime Otu Onye bụ Holy Holy?
Njikọ nke Nna; Ọkpara na Mmuo Nso bu ndi mebere Atọ n’Ime Otu.
Ọhụụ ya ji nwayọ nwayọ ma anyị nwere ike ịhụ ha n'oge niile Bible.
Na mbido, na usoro mkpụrụ ndụ, Chineke pụtara n’ike ya n’eluigwe na ụwa na ihe nile dị ndụ.
Oziọma nke Agba Ọhụụ anyị hụrụ na Jisọs Kraist bịarutere, nwanyị amụrụ nwanyị site na ọrụ na amara nke Mụọ Nsọ.
N'ebe ahụ ka anyị malitere ịmara banyere ndụ nke Onye Nzopụta, mgbe ahụ ọ nwụrụ, bilitere ma rịgoro n’eluigwe, ọ hapụrụ anyị nkwa nke mmụọ nsọ, mana gosipụtara nke a nanị mgbe oge ụbọchị Pentikọst dere n’akwụkwọ Ọrụ Ndịozi. Ndị ozi ma na-aga n'ihu na-eso anyị ruo taa.
Chi di ike nke n’enye anyi ihe obi anyi choro, nke anyi n’eme na otutu nkpuru obi.
Mọ Nsọ di njikere ige anyị nti.
Ekpere nke Holy Holy Trinity
Ekelerem gi Onye Okike ime mmụọ, maka Chinekem na Onyenwe m, a na m ekelekwa gị ụlọ ikpe niile dị na elu igwe na aha nwanyị a gọziri agọzi, Nwunye gị na-ahụ n'anya maka onyinye na ihe ùgwù niile ị ji chọọ ya mma, ọkachasị maka nke ahụ zuru oke na nke Chukwu. ebere nke I jiri ziga obi ya dị nsọ ma dị ọcha n’omume nke ebube ya kacha dị elu n’eluigwe; Eji m obi ume ala na-arịọ gị n’aha Nwanyị na-enweghị atụ, nye m amara gbaghara m mmehie niile m mere kemgbe oge mbụ m nwere ike imehie; ruo ugbu a, nke m na-ewute obi m, na ebumnuche nke ịnwụ kama iweghachi ebube Chineke gị ọzọ; na maka oke kachasị mma na nchebe kachasị nke Nwunye gị kachasị hụ n'anya, ana m arịọ gị ka inye m na N. onyinye dị oke ọnụ ahịa nke amara gị na ịhụnanya Chukwu, nye m ọkụ ndị ahụ na enyemaka pụrụ iche nke Providence gị ebigoro ụzọ zọpụta m, ma duru m ee
Ekpere nke Holy Catholic Trinity nwere mmetụta ozugbo.
Ekpere, ngwa agha di ike nke nke anyi bu ndi kwenyere na ike nke Onyenwe anyi.
Ngwá ọrụ dị ike nke Chọọchị Katọlik mara ka esi eji ya na nke ahụ na-ahapụ anyị ihe nlere anya, ihe atụ ka anyị wee mara otu esi ajụ, okwu ndị anyị ga-eji.
Ekpere abughi ihe ojoo, ha bu ohere iji ha eme ihe n ’ekpere, imuta ikpe ekpere n’ezie, ya mere anyi ji ekpe ekpere iji duzie anyi n’usoro.
EKPERE EKPERE NIILE maka ima
N’aha nke Nna na nke Okpara na Mmuo Nso, Amen.
Atọ n’Ime Otu, mmalite anyị na njedebe anyị, ike m na enyemaka m na enyemaka m nke Chineke, onye bi n’ime obi m ma nọ n’ime mkpụrụ obi m ma zighachaa mmụọ m niile.
Holy Holy Holy Holy, kwesịrị nsọpụrụ niile, otuto na otuto, ekwere m na ike gị, Chukwu Nna, Chukwu Ọkpara, Chukwu Mụọ Nsọ.
Ekwere m ntụkwasị obi na onyinye gị anya na enwere m olile anya na Gi, na olile anya m na ọmịiko m tinyere gị n'aka gị, nyere m aka ịbawanye okwukwe m na kwa ụbọchị n'ịhụnanya gị bụrụ ezigbo mmadụ na iteta na agbamume na ịnụ ọkụ n'obi.
Chineke agọziri agọzi, are bụ isi iyi nke ịhụnanya na ndụ na-esite na ya pụta, na i kere anyị dịka onyinyo gị na oyiyi gị si dị, nakwa na ihunanya anyị nwere n'ebe ị nọ zitere Chineke Ọkpara ka o jiri ndụ ya gbapụta anyị wee zọpụta anyị na mmehie, I ...
(Kwuo aha gị)
Ana m enye gị, ma dokwaa ihe nile dị na ọnụnọ m ma nwute m nke ukwuu, a na m arịọ gị ka ịgbaghara m maka mmejọ m niile m mehiere na maka mmehie m mere ruo taa na nke kewapụrụ m n'ebe ị nọ.
Atọ n’Ime Otu, ana m arịọ gị ka meere m ebere, ma nyere m aka gị, ka mkpụrụ obi m jupụta n’onwe m, na-agbanwe onwe m ịbụ onye ndidi, nghọta, wedata onwe gị ala ma yikwasị ịdị mma gị.
Mmụọ Nsọ gọziri agọzi, bụ isi iyi nke nkasi obi niile, a na m arịọ gị ka mee ka mkpụrụ obi m niile jupụta n'ụba onyinye gị.
Are bụ olile anya m na ọta m n’agha m, you bụ ike m n’oge nsogbu na nchekasị.
N'ihi nke a abim ikpere n’ala n’iru Gi ka m juo gi biko mee ka aka gi biyere m aka ma na-ario m n’iru Chineke Nna inweta enyemaka ya ozugbo.
Mụọ Nsọ nke Eluigwe, mee m ike ma nwekwuo obi ike iji gaa n’ihu agha a m na-eche ihu, biko gee ntị gị n’arịrịọ arịrịọ m ma nye m ihe m chọrọ n’ụbọchị a.
Biko k'anyi nwuo n’ime obi m ihunanya nke Chineke nke n’enye n’edeputa obi ndi ebere gi. Maka ihunanya gị, ike gị na ebere gị, a na m arịọ gị ka ị tọhapụ m n'ahụhụ niile, na ọ nweghị ihe na-emebi udo m ma ọ bụ mee ka m taa ahụhụ.
Atọ n’Ime Otu, a bịara m jiri ntụkwasị obi zuru oke bịakwute gị, ya na okwukwe niile nke mkpụrụ obi m, ka ị nwee ike belata nhụjuanya nke na-ewetara m oke nhụsianya, biko gwọọ ọnya nke obi m ma wụsara m ebere gị na m achọrọ m nke ukwuu mkpa:
(Gwa Mọ Nsọ ihe choro ngwa ngwa ma juo maka enyemaka ha di ebube)
Chukwu Nna, imeela nihi na ige nti n’ekpere m, nihi ihu n’anya Gi infinito, na maka nchebe nke ịhụnanya gị na-enye m, na ọ na-echebe m ma na-akasi m obi.
A na m arịọ gị ka i nyere m aka, Atọ n’Ime Otu, ana m arịọ gị maka arịrịọ na amara nke Meri A gọziri agọzi, nne nke Jizọs na nne anyị.
Did nwere mmasị n'ekpere maka Atọ n'Ime Otu maka ịhụnanya?
Hụnanya bu ihe na-ekpesi ekpere anyi ike, ma o n’eme anyi igwa ndi ozo ma o bu na anyi na-acho ihunanya iji gafee anyi.
Ihe ọ sọrọ ya bụrụ, ihe dị mkpa bụ ịrịọ n ’obi, sitere na nkpuru obi ya na okwukwe ya.
Ihe na-eme ka ekpere anyi sie ike ma nweta azịza ya bụ na anyị kwenyere na enwere ike inye anyị ihe anyị na-arịọ.
Rịọ n’ịhụnanya, ka anyị mara etu anyị ga-esi mata ya n’oge ọ gafere n’ụzọ anyị dị oke mkpa ebe ọ bụ na okwu Chukwu na-akụzi na obi na-eduhie ma nwee ike ime ka anyị kwenye na anyị achọta ịhụnanya mgbe ọ na-adịghị.
Nke a bụ ihe kpatara inwe nduzi nke Atọ n'Ime Otu dị nsọ ji bụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndụ na ọnwụ.
Ekpere nke Atọ n’Ime Otu maka okwu siri ike ma dịkwa ọsọsọ
Atọ n’Ime Otu, Chi atọ n’ime otu na Nna, Nna, Ọkpara na Mụọ Nsọ, mmalite anyị na njedebe anyị, na-akpọ isiala n’ihu Gị a na-akpọ isiala: agọziri agọzi na otuto dịrị Chukwu Nsọ! Gị, Nsọ Nsọ bụ nsọpụrụ niile, otuto na otuto maka mgbe ebighi-ebi, ejiri m obi m niile kwere gị, m chọsiri ike ịbụ ndị ji ikwesị ntụkwasị obi na-efe ya, abịarute m na ntụkwasị obi zuru ezu ịrịọ gị ka ị hụ m mgbe niile na-adịghị njọ na ihe ọjọọ. nkpagbu na ihe egwu, na na enyemaka m, ana m arịọ gị, nye m amara gị.
Nna nke elu-igwe, ezigbo Onye Ọzụzụ Atụrụ, Mụọ Nsọ, a na m arịọ gị arịrịọ na mmeso ọma nke Meri nwanyị a gọziri agọzi, nye m enyemaka gị, nduzi na nchedo n'ihe niile na ndụ m.
Ebube diri Gi Chineke Nna, bu ezi nmata na amamihe ebighebi, ndu sitere n’aka gi, ihu gi si n’ebe I no puta, mee oge nile n’inwe ezi omume na ezi uche inabata ihe na akasi obi I zitere m; cheta na abum nwa gi, ma nwee obi ojoo banyere ahuhu m, na odi nkpa ma nyere m aka n’onodu nsogbu a:
were okwukwe siri ike juo ihe ichoro iru.
Daalụ, Nna dị ebere maka ịnọ ebe ahụ.
Otuto diri Gi Chineke nwa nke elu-igwe onye nkpuru obi m di nzobe, kuziere m iguzosi ike na ibi ndu gi na omume oma gi, nye m nkwụsi ike na ntachi obi iji mezuo nkuzi gi ma mee ka m na eme oru ebere karia karie gi. ihe m na -agbalị kwa ụbọchị, napụta m na njikọ ndị iro nwere na nke m, wepụ m ma chebe m nhụjuanya niile na - enye m nsogbu ma nyere m aka ọrụ ebube gị na nsogbu a: (kwughachi arịrịọ ahụ na nnukwu olile anya).
Daalụ m ezigbo onye Jesus maka ịnọ n’akụkụ m n’oge nkụda mmụọ na nsogbu.
Ebube diri Gi Mmuo Nso, n’uzo nke na-egosi ihe nile, na I bu obi uto, nkwekorita na obi uto nke okike, n’eme ka osiso nye ihe mmasi nke Chineke nyem udo, nyem aka m na nsogbu na nyem aka. ka m wee nweta ihe m choro ugbu a.
Ekele dịrị gị mmụọ nke ịhụnanya maka inyere m aka mgbe ihe niile gbara ọchịchịrị ma achọrọ m Ìhè.
Nne m na Nwanyị nke nwanyị, Nwanyị nwanyị nke Eluigwe who nọ onye nọ nso n’okwukwo Nsọ dị na-ekpe ekpere maka m na nsogbu na adịghịzị m ugbu a, bụrụnụ onye ọkịkpe m na ọkara ka arịrịọ m wee gaa, mee ka m nweta ọrụ ebube nke m chọburu na ndu m
Daalụ nne m ị hụrụ n'anya, nwanyị a gọziri agọzi nwanyị nwanyị Mary, maka inwe nghọta ma na-eme ihe niile anyị chọrọ.
Chi nke Chukwu, Nna, Nwa na Mmuo Nso, nye m ebere gi, nye m obi ebere gi ma nye m ihe osiso n’ezi na nkpagbu m.
Nna, Nwa na Mmuo Nso, Chukwu di nma na nke Holy Holy, a huru m gi n'anya, a na m akwanyere gi ugwu, a na m enye gi ike m.
Atọ n’Imepe nke ,hụnanya, Chineke nke obi ọmịiko, apụrụ m onwe m ime uche Gị, n’ihi na oge gị zuru oke ma naanị gị You ma ihe kacha mma maka m, Ebube diri Nna, Ebube diri Ọkpara, Ebube Mụọ Nsọ Trinidad, dị ka ọ dị na mbido, ugbu a na ruo mgbe niile ebighị ebi, ruo mgbe niile ebighị ebi.
Ọnọdụ ndị ahụ ebe enweghị ike mmadụ ọ bụla nke anyị nwere ike ịme.
Ọnọdụ ndị ahụ ebe ha nyere anyị nyocha ahụike, ebe otu onye ezinaụlọ furu efu, ebe nwatakịrị chọrọ enyemaka Chineke na amaghị ya ma ọ bụ na ọ chọghị ịrịọ maka ya, nhụjuanya, ihe mgbu, enweghi ike, enweghị nsogbu na ọnọdụ ụfọdụ na mmetụta ndị na-eme ka anyị nwekwuo agụụ. ha di ebe aka ike nke Chineke ji ike nagha.
Ekpere nke Atọ n’Ime Otu nwere ike inyere anyị aka n’oge adịghị anya n'etiti nsogbu ndị kachasị sie ike idozi.
Ihe niile bụ okwukwe na ntụkwasị obi na Onyenwe anyị, kwenye na ya na-ejide ihe niile, marakwa na ọ na-eme.
Short maka nchebe
A na m ekwere ma na-asọpụrụ gị, Nwanyị Nwanyị Kachasị Nsọ, Nwanyị Nwanyị nke Eluigwe, Nwanyị na Onye Nlekọta nke eluigwe na ụwa, dịka Ada nke Nna ebighi ebi, Nne nke Ọkpara ọ hụrụ n'anya kachasị ukwuu, na nwunye kachasị ịhụnanya nke Mmụọ Nsọ; na kpọọ isi ala n'ụkwụ nke feetdị ukwuu gị jiri ịdị umeala n'obi kasịnụ ana m arịọ gị maka afọ ọma ahụ dị nsọ; na i jubigara oke ókè na mnwere ike ịnabata eluigwe, na ị nyere m amara na ebere nke ịtụkwasị m n'okpuru nchebe kachasị ntụkwasị obi gị na ịnabata m n'ọnụ ọgụgụ ndị ohu kachasị nwee obi ụtọ ma nwee ihu ọma ị na-ebu na ara gị na-amaghị nwoke.
Gosịwanụ onwe unu, nne m na ezigbo nwanyị m nke na - eme ebere, ịnabata obi m nhụsianya, ebe nchekwa m, uche m, na ike ndị ọzọ nke ime na mpụta; Nabata anya m, ntị m, ọnụ m, aka m na ụkwụ m, chịa ha dịka ihu ọma nke Ọkpara gị si dị, yabụ, na mmegharị ya niile ọ chọrọ inye gị otuto na-enweghị njedebe.
Na maka amamihe ahụ nke Ọkpara gị kachasị hụ n’anya mere ka ị kọwaara gị, m na-arịọ arịrịọ ma na-arịọ gị ka ị bịakwute m ìhè na idoanya iji mara onwe m nke ọma, ihe m na-enweghị, na karịsịa mmehie m, ịkpọ ha asị ma kpọọ ha asị mgbe niile, na-enyekwa m ìhè ịmara ọnyà. nke onye mgba nwa na ndị agha ya zoro ezo na ndị pụtara ìhè.
Karịsịa, nne na-asọpụrụ Chineke, m na-arịọ amara gị ... (kwuru).
Nke a ekpere ọrụ ebube Ala Santísima Trinidad ịjụ maka ahụ ike anyị, nchebe na ọganihu siri ike!
Na-echebe anyị, na-elekọta anyị y duzie anyị ime ihe bu uche Chineke. Anyị nwere ike ịrịọ maka nchebe onwe anyị ma ọ bụ maka ezinụlọ anyị na ndị enyi anyị.
Cheta na ume niile dị mma a na-esite n'aka anyị na-emetụta ihe niile gbara anyị gburugburu.
Onweghi ihe Chukwu atọ n’enweghị ike ichebe anyị, onweghị ihe dị ike ma ọ bụ karịa Chukwu ike, ọ bụ ya mere anyị ji atụkwasị obi na ọ bụ ya na-elebara anyị na ndị anyị anya n’agbanyeghi ebe ha nọ.
I nwere ike ikpe ekpere mgbe ọ bụla ịchọrọ.
Ekpere nke Atọ n’Ime Otu ahụ enweghị ụbọchị, awa ma ọ bụ oge zuru oke.
Anyi aghaghi ikpe ekpere mgbe anyi choro ikpe. Anyị kwesịrị inwe okwukwe ma kwenye mgbe niile na ihe niile na-aga nke ọma.